July Dream: Am Iabad boy?
Posted by JulyDream at 6:42 PM
တောကျီးကန်းတွေကြားထဲမှာ လည်း..ကျီးဗိုလ် ကြီး ဖြစ်နေ သေး တယ် ဆို ပါတော့။။။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် နဲ့ ပေါင်းလို့ ဖြစ်တာ နေမယ် ... :P
Bravo!!! လူမိုက်တွေကြားထဲ ကိုယ်ပါ မိုက်မသွားတဲ့အတွက်...
Try to beaBad Guy for the Real Bad Guys...
ကျနော်ကြားဖူးတာတစ်ခုက တော့ ရွှေရှိရာ ရွှေလာဆိုလား ဘာဆိုလား :)
သူများတကာတွေရဲ့ ဘ၀လို့ မလှပပေမယ့် ဖြူစင်တဲ့ နှလုံးလှ ပိုင်ရှင် အကျည်းတန်လေးတွေပါဗျာ။ ကျွန်တော်က ဗိုလ်ကြီး မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ တော်ကြာ ဆိတ်ဗိုလ်ကြီးဆိုပြီး ထင်ခံနေရအုံးမယ်။ မုတ်ဆိတ်မွှေးက ထားတာ ၂ လ ပဲ ရှိပါသေးတယ်ဗျ။
ဆရာသမားလည်း ဇ ရှိပုံပဲနော်။ ဘာ ဇ လည်းတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိဘူး။ အဟဲ..
မင်းလည်း လူမိုက်ပဲလေ။ ငါ ပေါင်းတဲ့အထဲမှာ မင်းလည်း ပါတယ် ဆိုတာ မမေ့နဲ့။ ငါ့သိတဲ့ ဘဏ်တွေ ပြိုလဲရတဲ့ တရားခံထဲမှာ မင်း ပါတယ်ဆိုတာ မမေ့နဲ့နော်။ ဘဏ်က ကောင်မလေးတွေ ခဏ ခဏ ခွင့်ယူရတာ မင်းကြောင့်။ အဟက်... (စတာနော် အတည်)
ရွှေရှိရာ ရွှေလာသလို ကျွန်တော်ဆီကို အခုလာတာ ဘယ်သူလဲ ဟင်။ ဟ ဟ.... ဘယ်ရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်စကားနဲ့ ကိုယ်ပြန်ချည် ခံရတာကို လက်တွေ့ ပြတာပါ။ (ဒါလည်း စတာနော် အတည်)
လူမိုက်လေးလဲ မဟုတ်ပါဘူး... လူမိုက်ကြီးလဲ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်တာပဲ... စေတနာထားတတ်တယ်လို့ပဲ ယူဆသွားတယ်နော်...း)
အချစ်ရေ့ .. ကိုယ်ဟာ လူဆိုးလေးပါ...
ကြယ်စင်နတ်သမီးက... ပညာရှိဆန်ဆန် ရေးသွားတယ်။ လူမိုက်လေးလည်း မဟုတ်ဘူး။ လူမိုက်ကြီးလည်း မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဒါဆို သူ ပြောချင်တာက ကျွန်တော်ဟာ လူမိုက်လတ်ပေါ့နော်။ အဟ...
Republic က အသံကောင်းကြောင်း ကြွားတဲ့အနေနဲ့ သီချင်း ၀င်ဆိုသွားပုံပဲ။ ၁ ပုဒ် ၅ ကျပ်... ၃ ပုဒ် ၁၀ လား ခင်ဗျာ။ :P
လူမိုက်ထက် ပိုမိုက်တဲ့ ဦးဒရမ်း
ကျွန်တော် လူမိုက်ထက် ပိုမမိုက်ပါဘူးဗျာ။
လူမိုက်တွေလောက်လည်း မမိုက်တတ်လို့ တခါတလေ တဇွတ်ထိုး တဇော်ကန်း မိုက်လိုက်ချင်တယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် မိုက်တယ် ဆိုတာလည်း လွယ်တာမှတ်လို့...
လုပ်တတ်ရင်လုပ်ပါလား တို့တော့မလုပ်တတ်လို့မလုပ်ဘူး ။ ပိုစ် မှာ ဂျုလိုင်ညွန်းတာတွေ သွားဖတ်လို့။ နဂိူုစာမျက်နာပျောက်သွားလို့။ စီဘုံးက ဂျုလိုင်ကို ဘဲနိပ်လိုက်ရတယ်။ ဒီကလည်းနိပ်ချင်နေတာနဲ့အတော်ဘဲ။